Ankorondrano : fiara 4×4 « cortège » nivadika ambony ambany | NewsMada
Ankorondrano : fiara 4×4 « cortège » nivadika ambony ambany
Fiara 4×4 Toyota V8 an’ny mpitari-dalana filohan’ny antenimierampirenena, Jean Max nivadika teny Ankorondrano, omaly. Naratra ireo mpiambina manokana tao anatiny. Soa fa tsy nisy ny aina nafoy. Teo anoloan’ny Hotel Ibis mihitsy no nisehoan’ny loza omaly. Araka ny fanazavana, nirefotra tampoka ny kodiaran’io fiara 4×4 V8 io sady nnadeha mafy ka izay ny nampivadika azy. Soa ihany fa tsy nisy olona niantefany na fiara hafa. Naratra ireo mpiambina manokana tao anatiny saingy tsy nisy ny tena natahorana.
“Fandehanana mafy ny nahatonga ny loza. Tao anatin’ny indray mipi-maso ny nampivadika ilay fiara io”, hoy ny olona teny an-toerana.
Tsy mahagaga intsony ny fahitana ireo fiarana manam-pahefana mandeha mafy eto amintsika, ary toy ireny hifaoka ireny mihitsy raha sendra misy mibahambahana. Tamin’ity indray mitoraka ity, sendra ny patsa iray tsy omby vava izy ireo tamin’ity ka namoa-doza. Soa ihany fa tsy nahafaty olona.
Maro ny olona mimenomenona amin’ny fomban’ny manampahefana eto amintsika. “Fotoana ametrahana ny lalàna itovian’ny olona rehetra izao fa tsy misy ny manam-pahefana sy ny olon-tsotra fa samy tokony hifanaja. Raha nahafaty olona io fiaran’ny manam-pahefana io, miala maina izay voany, ary tranga efa niseho izany”, hoy ny fanehoan-kevitry ny olona. Inona ny fandikan-dalàna mifanaraka amin’ny afitsok’ireto manam-pahefana ireto?